प्रतिनिधिसभा विघटनः नेपाली कांग्रेस ककनी गाउँपालिका , वडा न. ३ ले पनि गर्यो विरोध प्रदर्शन – Interview Nepal
प्रतिनिधिसभा विघटनः नेपाली कांग्रेस ककनी गाउँपालिका , वडा न. ३ ले पनि गर्यो विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं , माघ ८ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध आज कांग्रेसले देशभर प्रर्दशन गरेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस ककनी गाउँपालिका , वडा न। ३ ले पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
वडा सभापति रमेश ढुंगाना र बिजय ढुंगाना ककनि नेविसंघको संयोजकमा पर्दशन गरिएको हो । संसद विघटनविरुद्ध कांग्रेसले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
आन्दोलित कांग्रेसल आज पनि ६ हजार ७ सय ४३ वडामा एकसाथ प्रदर्शन गरेको हो। यसअघि पुस १३ गते १६५ वटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, पुस २५ गते ३३० वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र माघ ५ गते सबै पालिकामा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।
Tagged ककनी गाउँपालि